बिरामीको मृत्युमाथि बिचौलियाले खेल्न थाले : निर्देशक डा शर्मा | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
बिरामीको मृत्युमाथि बिचौलियाले खेल्न थाले : निर्देशक डा शर्मा
काठमाडौं- बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचारका क्रममा एक बालिकाको मृत्युको विषयले विवादित रुप लिएको छ। बालिकाका आफन्तले उपचार प्रक्रियाका विषयमा छानबिन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी हालिसकेका छन्। काउन्सिलले छानबिन समेत सुरु गरिसकेको छ। काउन्सिलको छानबिन प्रतिवेदनपछि बालिकाको मृत्युको कारण बाहिर आउनेछ।
उपचारका क्रममा चिकित्सकले लापरबाही गरेको बालिकाको आफन्तको आरोप छ। आफन्तले गलत रगत चढाएका कारण बालिकाको मृत्यु भएको बताउँदै आइरहेका छन्। अस्पताल प्रशासनले भने बालिकाको मृत्युको कारणका विषयमा छानबिन भइरहेको बताउँदै आएको छ। बालिकाको मृत्युलगत्तै केही व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा चिकित्सकलाई दोषी देखाउने प्रयास पनि गर्दै आइरहेका छन्।
चिकित्सकले लापरबाही गरेको, अस्पतालबाट जबरजस्ती प्रहरी लगाएर लास उठाउन लगाएको, प्रहरीले र जिल्ला प्रशासनले समेत उजुरी लिन नमानेको लगायतका आरोप बालिकाका आफन्तले लगाउँदै आइरहेका छन्।
बालिकाका आफन्तले लगाएका यिनै आरोप र बालिकाको उपचारका प्रक्रियाका विषयमा स्वास्थ्यखबरले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा ज्योतिन्द्र शर्मासँग कुराकानी गरेको छः
अस्पतालमा उपचाररत पाँच वर्षीया बालिकाको मृत्युमा चिकित्सकले लापरबाही गरेको भन्ने आरोप छ नि?
यो सरासर झुटो आरोप हो। उपचारका क्रममा डाक्टरका तर्फबाट लापरबाही भएको छैन। बालिकाको उपचारका क्रममा चिकित्सकले सक्दो बचाउने प्रयास गरेका छन्। ती बालिकाको मुटुमा जन्मजात जटिल किसिमको रोग थियो। उनको मुटुभित्रको दुईवटा ठूला भर्टिकलको बीचमा प्वाल थियो भने दाहिने तर्फको भर्टिकलमा मासु बाक्लो भएर दुई खण्ड बनेको थियो। दाहिने तिरको उक्त खण्ड एउटा मात्र हुनुपर्नेमा मासु बाक्लो भएर दुईवटा हुँदा रगत बग्न समस्या थियो।
यो मुटुको जन्मजात र अप्ठेरो रोग हो। त्यसका उपचार भनेको शल्यक्रिया नै हो। अस्पतालमा उनको ओपनहार्ट सर्जरी भएको थियो। सर्जरीका क्रममा करिब एक सय मिनेट मुटुलाई पुरै बन्द गरेर मुटुको प्वाल टाल्नेदेखि दाहिनेतिरको मुटुको खण्डको पनि उपचार भएको थियो। फोक्सोमा जाने बाटो बनाउने जटिल शल्यक्रिया पनि भएको छ। शल्यक्रियाका क्रममा बालिकाको मुटु र फोक्सो चलाउन हार्टलंग मेसिनको प्रयोग भएको छ।
शल्यक्रियाका क्रममा बालिकालाई रगत पनि चढाइएको छ। शल्यक्रियापश्चात् बालिकाको पिसावमा रगत देखियो। पिसाबमा रगत देखिने कुरा हार्टलङ मेसिले पनि हुनसक्छ। त्यसपछि बच्चालाई आइसियुमा ल्याइएको छ। तीनदिन पछि बच्चालाई भेन्टिलेटरबाट निकाल्ने कोसिस पनि गरिएको छ। तर, पाँचदिनमा बच्चाको मिर्गौला फेल भएर मृत्यु भयो। उपचारका क्रममा बच्चाको मृत्यु भएकोमा हामी सबै दुखी छौं।
तर, बच्चालाई गलत रगत चढाएका कारण मृत्यु भएको भन्ने आरोप छ नि?
बच्चालाई रगत चढाइएको कुरा साँचो हो। ल्याबबाट आएको रिपोर्टका आधारमा बच्चालाई रगत चढाइएको हो। ल्याबको रिपोर्टमा ‘कम्प्याटिबल’ भनेर लेखिएको छ। कम्प्याटिबल लेखेर दिएको रगत चढाउन मिल्छ। ल्याबले कम्प्याटिबल लेखेर दिएपछि रगत चढाउनेको त गल्ती हुने कुरा नै भएन। रगत चढाउनेले त रिपोर्टका आधारमा नै चढाउने हो। अब यसमा शल्यक्रिया गर्ने डाक्टरको त झन् गल्ती हुने कुरा नै भएन। अब त्यही रगतका कारण बिरामीको मृत्यु भएको हो वा होइन भन्ने कुरा त मेडिकल काउन्सिलको छानबिन रिपोर्ट आएपछि थाहा हुन्छ। छानबिन भइरहेको समयमा अहिले नै भ्रम फैलाउने काम त गर्नुभएन नि!
उक्त बालिकाको शल्यक्रिया तपाईंले नै गरेको भन्ने कुरा छ नि?
यो पनि गलत कुरा हो। बालिकाको मृत्युपछि मलाई बदनाम गराउन यो हल्ला चलाइएको हो। उक्त शल्यक्रियामा मेरो कुनै संलग्नता छैन। मलाई बदनाम गराउने नियतले नाम मुछ्ने प्रयास भएको हो। यदि यो केसमा मेरो गल्ती देखियो भने मलाई सिधै जन्मकैद दिए हुन्छ।
बालिकाको उक्त शल्यक्रियामा संलग्न अरु चिकित्सकको पनि कुनै दोष छैन। यदि यो घटनामा मानविय त्रुटी नै भएको रहेछ भने पनि त्यो ल्याबमा भएको हुनसक्ने सम्भावना छ। शल्यक्रिया र अरु प्रक्रियामा गल्ती छैन। बच्चाको जीवन बचाउन डाक्टरले गरेको प्रयासमाथि कुनै शंका गर्नुपर्दैन।
शल्यक्रियापछि बच्चाको मृत्यु मिर्गौला फेल भएर भएको छ। मिर्गौला फेल के कारणले भएको हो? रगत चढाएका कारण हो वा हार्टलङ मेसिनले हो भन्ने विषय काउन्सिलको छानबिनपछि रिपोर्टमा आउने नै छ।
तर, मृतकका आफ्न्तलाई भट्काएर केही अस्पतालभित्रैका कर्मचारी र बाहिरी बिचौलियाहरुले हामीलाई बदनाम गराउने काम गरिरहेका छन्।
तपाईंले बिचौलियाको कुरा उठाउनु भयो कोही चिनेर भन्नुभएको हो वा त्यतीकै भन्नु भएको हो?
बालिकाको मृत्युपछि यो घटनालाई बढाइचढाई भ्रम फैलाउने काम सुरेन्द्र यादव नाम गरेका व्यक्तिबाट भइरहेको छ। उसले पहिला बालिकाको काका हुँ भन्दै सुरेन्द्र साह भनेर नाम भनेको थियो। पछि हामीले उनको बारेमा बुझ्ने क्रममा उनी त साह नभई यादव रहेछन्। ऊ पेसाले लेखनदास हो। ऊ र ऊसँग मिलेका केही व्यक्तिले मृतक बालिकाको बुबालाई अस्पतालबाट आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाईदिने भन्दै अनेक आरोप लगाउन सुरु गरेको हो।
पछिल्लो समय अस्पतालले बालिकाको शव पनि लुकायो भन्ने आरोप लगाइएको छ। बालिकाको शव उनका हजुरबुवा र अन्य दुई आफ्न्तको रोहबरमा मुचुल्का उठाई प्रहरीले शिक्षण अस्पतालको शव गृहमा राखेको छ।
उनीहरुले नै बच्चाको मृत्यु भएपछि बिरामीलाई भेट्न दिएन, मृत्यु भएको पाँच दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखियो, काजजात केरमेट गरियो, धम्की दियौँ, मिर्गौला नै निकाल्यो भन्ने गलत आरोप लगाएका हुन्।
यो विषयमा अस्पतालले छानबिन अगाडि बढाएको खबर बाहिर आएको थियो नि, के भयो छानबिनमा?
बालिकाको मृत्युपछि आफन्तका तर्फबाट लापरबाहीको गुनासो आएपछि हामीले छानबिन अगाडि बढाएका थियौँ। तर, यही बिचमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट नै छानबिन टोली आएपछि हामीले छानबिन रोक्यौँ। काउन्सिलबाट आएको टोलीले सबै कागजपत्र लिएर गइसकेको छ। जब सरकारको आधिकारिक संस्थाले अनुसन्धान सुरु गरेपछि हाम्रो अनुसन्धानको अर्थ थिएन। त्यही भएर हामीले हाम्रो छानबिन बन्द गर्यौँ।
अब काउन्सिलको रिपोर्ट नआई केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। उक्त रिपोर्ट आएपछि कसको गल्ती भएको थियो भन्ने खुल्न आउँछ। तर, बिचौलियाहरुले भने अझै हामीलाई बदनाम गराउन जनतामा भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन्।
भरतपुर अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेनमा डा बगाले
‘श्रीमान् गम्भीर नेपाली’ बजाउँदा दुई युवक पक्राउ